RASMI: Goolhayaha kooxda Liverpool ee Alisson Becker oo ku guuleystay abaal-marinta Gacmo Gashiga Dahabiga ah ee Premier League – Gool FM
(Liverpool) 13 Maajo 2019. Goolhayaha Kooxda Liverpool ee Alisson Becker ayaa ku guuleystay abaal-marinta Gacmo Gashiga Dahabiga ee horyaalka Premier League (Premier League Golden Glove).
Alisson Becker ayaa abaal-marintan la guddoonsiiyey kaddib markii uu kulammada ugu badan shabaqiisa gool ka ilaashaday xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Xiddigan reer Brazil ayaa 21 kulan shabaqiisa gool ka difaacday intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkan 2018-19 ee horyaalka Ingiriiska, waxaana uu hal kulan dheerday goolhayaha kooxda Manchester City ee Ederson kaddib markii ay isla tageen kulammadii ugu dambeeyey ee shalay horyaalka lagu soo gabagabeeyey.
Goolhaye Alisson Becker ayaa abaal-marintan waxa uu ku garaacay midka ay ka soo wada jeedaan dalka Brazil oo ay isku xulka yihiin ee u safta kooxda Manchester City, Ederson kaasoo isna shabaqiisa gool ka ilaashaday 20 jeer xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Waxa uu noqday Becker ciyaaryahankii ugu horreeyey kooxda Liverpool ee ku guuleysta abaal-marintan gacmo gashiga dahabiga ah ee Premier League tan iyo goolhaye Pepe Reina oo hantay xilli ciyaareedkii 2007-08.
Alisson Becker ayaa ka mid noqday kaliya saddex goolhaye oo horyaalka Premier League xilli ciyaareedkoodii ugu horreeyey ku guuleystay abaal-marinta Golden Glove, waxaana labada kale ay kala yihiin; Petr Cech iyo Pepe Reina.
Haddaba halkaan hoose ka eeg goolhayeyaasha kulammada ugu badan shabaqooda gool ka ilaashaday xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League:-
Kepa Arrizabalaga (14)
Jordan Pickford (14)
RASMI: Eden Hazard oo ku guuleystay abaal-marinta kubbad sameeyihii ugu fiicanaa xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League